Kooxo Islaam naceeb ku jira oo Gubi lahaa Kitaabka Alle oo Boliiska Biljunka iyo Faransiiska la kala racadeeyey | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Kooxo Islaam naceeb ku jira oo Gubi lahaa Kitaabka Alle oo Boliiska...
Kooxo Islaam naceeb ku jira oo Gubi lahaa Kitaabka Alle oo Boliiska Biljunka iyo Faransiiska la kala racadeeyey
Xukuumada Beljimka ayaa dalkeeda ceyrisay 5 qof oo u dhashay dalka Denmark kuwaasoo doonayey inay kitaabka Quraanka kariimka ku gubaan magaalada Brussels gaar ahaan degaan ay ku badan yihiin dadka Muslimiinta.
Raggan ayaa sida la sheegay aaminsan fikirka midig fog, iyadoo Xoghayaha arrimaha gudaha dalka Belgium Sammy Mahdi uu raggan ku tilmaamay inay halis ku yihiin nidaamka iyo kala dambeynta.
Bog ay barta facebook ku leeyihiin ragga la tarxiilay ayey ku sheegeen inay xiriir la leeyihiin siyaasiga midig fog ee u dhashay dalka Denmark kaasi oo lagu magacaabo Rasmus Paludan kaasoo qudhiisa laga ceyriyay dalka Faransiiska Arbacadii ka dib markii uu muujiyay in uu doonayo in Kitaabka Quraanka uu ku gubo magaalada Paris.
Horraantii sanadkan ayaa siyaasigani xabsiga la dhigay muddo bilooyiin ah dalkaasi Denmark ka dib markii lagu eedeeyay inuu u gefay Islamka, islamarkana uu muuqaalo ka dhan ah Islamka uu so dhigay baraha bulshada uu xisbigiisa .
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo qalinka ku duugay heshiiskii Doorashada 2021
Next articleNin Waalan oo aana Qabiil loogu dilqy deegaanka Mareegur
Xiddigii kubadda cagta ee dalka Argentina Diego Maradona ayaa xalay geeriyooday kadib markii wadanaha uu istaagay, sida uu sheegay qareenkiisa. Maradona oo 60 jir ahaa,...
Madaxweyne Farmaajo oo ka wal walsan dhaq dhaqyada ka socda Muqdisho...
Cusman Abukar “ Waxaan halkan ku aragnay dad sidii argagixisadii Soomaaliya...
War deg deg ah Magaalada Muqdisho oo Bilooyinka soo socda yeelan...